SDA, ယာဉ်မောင်း | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: SDA, ယာဉ်မောင်း
အဆိုပါစက်ပြင်ပေါ်တွင်လည်ပတ်သို့ fit ဖို့ဘယ်လိုနောင်တရ teapot +
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလှည့်နှင့်မည်သို့မှန်ကန်စွာ fit ရမည်ကို teapot သင်ပေးပါ။ သတိရပါ၊ အလှည့်များသည်ဒုတိယဂီယာတွင်ဖြစ်သည်။ (အလှည့်နူးညံ့သိမ်မွေ့လျှင်တတိယအပေါ်ခဲသည်) ။ ဘရိတ်နှင့်ဒုတိယဂီယာသို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည် ...
ပြောင်းပြန်လှုပ်ရှားမှုကဘာလဲ? နောက်ကြောင်းပြန်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ခေါင်းကိုက်။ အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ရှေ့သို့ထွက်သည်။ တ ဦး တည်း ဦး တည်ချက်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံး။ နောက်တစ်ခုသို့ပြောင်းပြန်နောက်ဘက်ရှိပါက ...
အဘယ်အရာကိုလက်မှတ်တွေ Down လက်မှတ်တွေတက်အကြားဝိရောဓိ?
လက်မှတ်တွေအကြားဝိရောဓိအဆင်းလက်မှတ်တွေကဘာတွေလဲ? ကျေးဇူးပြု၍ မေးခွန်း ၈-၁၃ တွင်ဖော်ပြထားသည့်ရုပ်ပုံတွင် PRESCRIBING နိမိတ်လက္ခဏာ "ရှေ့သို့ဖြောင့်" ပါ (ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ယာဉ်စည်းကမ်းများ၊ နောက်ဆက်တွဲ ၁။ လမ်းအမှတ်အသားများ။ ၄ ။ ပြီးတော့ ...
လက်စွဲဂီယာပေါ်ရှိဘရိတ်အကြောင်း ... သင်ဘရိတ်နေစဉ်, သင်ခြေနင်းနှစ်ခုညှပ်ခဲ့ပေမယ့် clutch နှင့်ဓာတ်ငွေ့မဟုတ်, clutch နှင့်ဘရိတ်။ မင်းအရာအားလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေး ...
မြန်နှုန်းကန့်သတ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုတရားဝင်မှုareaရိယာ !!! ကန့်သတ်ချက်သည်အနီးဆုံးလမ်းဆုံအထိရောက်သည်အထိ၊ နိမိတ်လက္ခဏာကိုလမ်းဆုံနှင့်အမှတ်အသားပြုထားသည့်နေရာနှင့်အခြေချရာနေရာ (ဆိုင်းဘုတ်မရှိဘဲပင်) အထိဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ... ဆိုင်းဘုတ်များရှိသင့်သည်။
ယာဉ်ကြောစည်းကမ်းများအရ "ကိုက်" တဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုလား ယာဉ်ကြောစည်းကမ်းများအရ "ကိုက်" တဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုလား။
ယာဉ်ကြောစည်းကမ်းများအရ "ကိုက်" တဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုလား။ ယာဉ်ကြောစည်းကမ်းများအရ "ကိုက်" တဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုလား။ နံပါတ် ကိုက်, အ SDA ၏အပိုဒ် 1.2 အရသိရသည်ကပ်လျက်ပိုင်နက်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီမှာ ... ပေမယ့်
မေးခွန်းတစ်ခုကို vatolyubitelyam ဥပမာစာရွက်စာတမ်းများကိုစစ်ဆေးသည် DPS အရာရှိမျှအကြောင်းပြချက်များအတွက်မော်တော်ယာဉ်ကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါရှိမရှိပြောပြရန်
ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်ရဲအရာရှိတစ် ဦး သည်အကြောင်းပြချက်မရှိသောကားကိုရပ်တန့်နိုင်ခြင်းရှိမရှိပြောပါ။ ဥပမာအားဖြင့်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်သောအခါစာရွက်စာတမ်းများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ စာရေးကိရိယာပြင်ပတွင်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ...
loaded TS တိုင်းတာသည့်အခါယာဉ်များ၏ခွင့်ပြုချက်စုစုပေါင်းအလေးချိန်? သို့မဟုတ်မ?
ယာဉ် loaded အခါတိုင်းတာခွင့်အများဆုံးမော်တော်ယာဉ်အလေးချိန်? ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ? ခွင့်ပြုထားသောအများဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူမှတည်ထောင်ထားသောကုန်တင်ယာဉ်၊ ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည်များပါ ၀ င်သောတပ်ဆင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်၏အများဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက် ...
သင့်ရဲ့အမြင်, အဘယ်အရာကိုပိုကောင်းအော်တိုသို့မဟုတ် manual ဂီယာ ???
ထင်မြင်ချက် - အလိုအလျောက်သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ဂီယာပိုကောင်းခြင်းသည်ဘာလဲ။ အကယ်၍ ACKP သည်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားပါက၎င်းကိုဆွဲထုတ်။ မရပါ။ ၎င်းသည်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသော၊
လူကြိုက်များသော "အများပြည်သူသုံးလမ်းမ" ကဘာလဲဆိုတာရှင်းပြပါ။
လူကြိုက်များသော "အများပြည်သူသုံးလမ်းမ" ကဘာလဲဆိုတာရှင်းပြပါ။ စက်ရုံများ၊ ဂိုဒေါင်များစသည်တို့ကိုဖြတ်သန်း။ နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများ ယေဘူယျအားဖြင့်အပြင်လူများ၏ဝင်ခွင့်ကိုအကန့်အသတ်ရှိသောဒေသများရှိလမ်းများနှင့်ကားလမ်းများရှိသည်။ အခြားသူများကမူလည်ပတ်နိုင်သည်။
ကလမ်းဆုံလမ်းခွမှာမှီဖို့ဖြစ်နိုင်မလား? အချို့ကိစ္စများတွင်ကမဖွစျနိုငျတယျ, ဖြစ်နိုင်သမျှပါသလဲ
လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်မှီရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား? ဘယ်ကိစ္စတွေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်တာလဲ။ စည်းမျဉ်းသစ်များအရအသစ်သောစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်မှီရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ လုပ်ခံရသည့်လက်ခံနိုင်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်ကြိုတင်မဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေ့ဆက် ...
ဆိုင်းဘုတ်နှင့်စည်းမျဉ်းကိုရှင်းပြပါလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါက - အခွင့်အရေးကိုဝယ်ယူထားပါသလား။ အကယ်၍ အဖြူပေါ်ရှိအဖြူရောင် - အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက် ၆၀ ကီလိုမီတာအထိရှိလျှင်အဖြူရောင်အနက်ရောင်အဖြူရောင် - ကီလိုမီတာ ၈၀ အထိနှုန်းသည်အမျိုးအစားကွဲပြားသည်။
စစ၏မေးခှနျးကို 2.1.1 SDA RF
စစအပေါ်မေးခွန်း။ ၂.၁.၁ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ယာဉ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ CTP မူဝါဒ၊ ယာဉ်အတွက်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ၂.၁.၁ ။ ရဲအရာရှိများ၏တောင်းဆိုချက်အရ၎င်းတို့အားယာဉ်မောင်း၏အတည်ပြုချက်အတွက်ပေးပါ။
ကင်မရာကိုကြေကွဲမြန်နှုန်းပေါ်ဖမ်းမိ အကယ်. အဖြစ်လျင်မြန်စွာဒဏ်ငွေဆိုက်အသွားအလာ၏အခြေစိုက်စခန်းမှာထငျရှားလေ?
အကယ်၍ မြန်နှုန်းမြင့်ချိုးဖောက်မှုကိုကင်မရာတွင်တွေ့ရှိပါကယာဉ်အသွားအလာရဲဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဒေတာဘေ့စ်ထဲ၌ငွေမည်မျှလျင်မြန်စွာပေါ်လာသနည်း။ စာရေးကိရိယာများ၌ဗီဒီယိုကင်မရာများတပ်ဆင်ထားသောသူများသည်တံတားများ၊ ကျမ်းပိုဒ်များ၊ ပို့စ်များကိုချိတ်ဆက်ထားခြင်း - ၃ ရက်မှ ၁၀ ရက်ထိ ...
ဒါဟာလူထုလမ်းများတခုတခုအပေါ်မှာ ATV စီးနင်းခွင့်ပြုသလဲ?
အများပြည်သူသုံးလမ်းများတွင် ATV ကိုခွင့်ပြုပါသလား။ အသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လိုအပ်သောအလင်းရောင်ကိရိယာများဖြစ်သောအလှည့်အချက်ပြစသည်တို့တပ်ဆင်ထားပါက ... သင်လုပ်နိုင်သည်။
သင်အချိန်မီဒဏ်ငွေမပေးလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်မခင်ပွန်းမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် သူ (ထိုဒေသကိုမသိဘဲ) သည်လမ်းတစ်လမ်း၊ လူနေအိမ်areaရိယာအတွင်းရှိနောက်ကျောလမ်း၊ မီတာများသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ကျင့်ထုံး၏ 12,5 3,1 ။ ထပ်ခါတလဲလဲချိုးဖောက်မှုများအတွက် 15 ရက်။ ဤစကားမှန်ပါသလော ငါဥပဒေများကိုရည်ညွှန်းဖို့တောင်းပန်
12,5 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 3,1 coap ။ ထပ်ခါတလဲလဲချိုးဖောက်မှုများအတွက် 15 ရက်။ အဲဒါမှန်ပါသလား ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂.၅ ကိုဖတ်ရှုပါ။ မော်တော်ယာဉ်များလည်ပတ်မှုအောက်တွင်ချွတ်ယွင်းမှုများသို့မဟုတ်အခြေအနေများရှိခြင်းကိုမောင်းနှင်သည်။
ယူအက်စ်အေမှာကားဘယ်လောက်သုံးမှာလဲ။ အသက် ၁၆ နှစ်အထက်အမေရိကန်အားလုံးနီးပါးတွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။ အထူးပြည်နယ်အေဂျင်စီမော်တော်ယာဉ်ဗျူရို (BMV)၊
ညှိနှိုင်းနေသောလမ်းဆုံတွင် ဦး လှည့်ခြင်းသည်အလယ်မှသာလျှင်၊ အလှည့်သည်အလှည့်နှင့်အတူတူပင်၊ သို့သော်မတ်စောက်သောထောင့်ဖြင့်အလယ်သို့မရောက်မီဘယ်ဘက်သို့မလှည့်ပါ ...
GKU "TsBDDMO" ။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကဘာလဲ။ ဘာလုပ်သလဲ။
GKU "TsBDDMO" ။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကဘာလဲ။ ဘာလုပ်သလဲ။ မော်စကိုဒေသ၏ယာဉ်အသွားအလာလုံခြုံမှုစင်တာတွင်နိုင်ငံတော်ဘဏ္treာရေးဌာနတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အမိန့်ကိုဖတ်နိုင်သည်။ အတိုချုပ် 15.03.2012/10/01 XNUMX:XNUMX ...
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,763 စက္ကန့်ကျော် Generate ။